के हामी छालाको सेतो पार्न "" को लागी हुन सक्छौं? - अफ्रीखेपरी फाउण्डेशन
COVID को प्रगति
आइतबार, जनवरी 17, २०२१
चलचित्र हेर्नका लागि
सौन्दर्य र फेसन
स्वागत शिशु र फैशन
के हामी छालाको सेतो बनाउन "को लागी" हुन सक्छौं?
गरेर जूली लोम्बे
पढ्नुहोस्: min मिनेट
उनको छाला हल्का। अफ्रो-फेमिनिस्टहरू, त्वचा विशेषज्ञ, समाजशास्त्री वा नेप्पी केटीहरूको क्रोधलाई आकर्षित नगरी यसलाई कसरी उस्काउने? अफ्रिकी विचित्रता भन्दा टाढा, ब्लीचिंग एक अभ्यास हो जसले लाखौं एशियाली महिलालाई (भारतदेखि जापान) लाई पनि असर गर्दछ। विरोधाभास, यो क्रिम, साबुन र अन्य इंजेक्शन प्रयोग गर्नेहरूका लागि यो लगभग वर्जित विषय हो!
मेलानिन र टायरोसिनेज: पिग्मेन्टेशनको मुटुमा।
किन छाला अन्धकार छ? Dermis को melanocytes मा समावेश, melanosomes melanin को अनुहार, एक गाढा pigment को अनाज हो। एन्जाइम, टायरोसिनेजको कार्य अन्तर्गत, मेलानोसोमहरू मेलानोसाइट्सबाट केराटीनोसाइट्समा पठाइन्छ जहाँ तिनीहरू छालाको माथिल्लो तहहरू रंग्छन्। कालो छाला, आनुवंशिक रूपमा एक घमाइको वातावरणमा विकसित गर्न प्रोग्राम गरिएको, अधिक संख्या र आकारमा melanosomes समावेश गर्दछ। यस मेलानिनको आवकले हाम्रो कोषहरूलाई सूर्यबाट युभी किरणका हानिकारक प्रभावहरूबाट बचाउँछ।
छालालाई सेतो बनाउन, टायरोसिनेसको कार्यलाई दबाएर मेलानोजेनेसिसलाई निषेध गरिएको छ: मेलेनोब्लाकिंग सक्रिय सिद्धान्तहरू जस्तै: हाइड्रोक्विनोन (युरोपमा प्रतिबन्ध लगाइएको, र, अधिक अफ्रिकामा पनि), कोजिक एसिड, अजेलाइक एसिड, ग्लाब्रिडिन, आबुटिन ...
तपाईको छाला ब्लीच कसरी गर्ने?
दिइएको मुख्य कारण सौंदर्य प्रश्न हो। वास्तवमा, एकतर्फी, सौन्दर्यको विश्वव्यापी विख्यात मोडल फेरी छाला भएको महिलाको हो। अर्कोतर्फ, कालो छालाले अक्सर हाइपरपिंगमेन्टेशन स्पटहरू प्रस्तुत गर्दछ जुन हामी रंगलाई मिलाउनको लागि घटाउन चाहन्छौं।
त्यस पछाडि, त्यहाँ छालालाई सेतो बनाउनको लागि सबै सामाजिक कारणहरू छन्। पोस्टकोलोनियल र जातीय भेदभावपूर्ण सन्दर्भमा, निष्पक्ष छाला (र / वा सिधा र / वा गोरा कपाल र / वा हल्का आँखा) भएको सामाजिक, व्यावसायिक र रोमान्टिक सफलतासँग सम्बन्धित छ।
तपाईको छाला छाडे सम्म ब्लीच गर्नुहोस्।
तैपनि, हल्का क्रीमहरू प्रयोग गरी थुप्रै तरिकामा खतरनाक छ।
स्वास्थ्य जोखिम: छाला को सुरक्षात्मक समारोह दबिएको छ। हामी अफ्रिकी महिलामा छालाको क्यान्सरका केसहरू देखिरहेका छौं। कोर्टिसोन युक्त उत्पादनले उच्च रक्तचाप, किडनी असफलता, मधुमेह, मासिक चक्र अवरोध वा हड्डी समस्यासमेत निम्त्याउन सक्छ ...
प्राय जसो नराम्रो परिणाम: अनियमित चित्रण "कन्फेटीमा", हाइपरपिग्मेन्टेशन (अनुहार, हात, कुहिनो, घुँडा), तन्काको दागहरू, एक्ने, शरीरको कपाल, शरीरको गन्धहरू ...
डबल निर्भरता: उत्पादनहरूको अनुप्रयोग रोक्न असक्षमता। एकातिर, कोर्टिकोस्टेरोइडमा शारीरिक निर्भरता छ, जसको अन्त्यले चिन्ता, उदासिनता, आत्मघाती इच्छाहरूको अनुभूति गर्दछ। अर्कोतर्फ, रोक्दा छाला लगभग राति नै पुन: हुर्कन्छ।
मनोवैज्ञानिक र पहिचान समस्याहरू: उज्यालो उत्पादनहरू प्रयोग गर्ने महिलाहरूले कहिलेकाँही दोषी महसुस गर्छन् किनभने ब्लीचिंग भनेको समुदायलाई उनीहरूलाई कालो भएकोमा लाज लाग्छ भनेर बताउन बराबर छ। उनीहरूले तिनीहरू को हुन्, उनीहरूको परिवार, उनीहरूको जरा, आफ्नो संस्कृति मा फर्कन्छ जस्तो तिनीहरूलाई लाग्छ। केहि, एकीकृत गर्न, आफ्ना युवा बच्चाहरू लाई उत्पादहरू लागू गर्न यति टाढा जान! र यी सबै "प्रयासहरू" उनको छालाको र change परिवर्तन गर्नका बावजुद, ती जे भए पनि कालो छन्।
लागत : उत्पादनहरु को खरिद गर्न समर्पित बजेट नगण्य छैन।
कुल प्रतिबंध कानून को लागी ...
त्यसोभए, यी सबै खतराहरू दिइएमा, किन सबै लाइटरहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरेन? युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका र अफ्रिकामा धेरै वर्षदेखि कानुनले विशेष गरी हाइड्रोक्विनोनमा केही उज्यालो सक्रिय सामग्रीहरूको प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। यद्यपि यो अझै धेरै उत्पादनहरूमा फेला पर्‍यो जसको प्याकेजिंगले थोरै जानकारी दिन्छ (सक्रिय सामग्रीहरू, एकाग्रता, मूल, आदि)।
कुल प्रतिबन्धको बारेमा, केही विशेषज्ञहरू तर्क गर्छन् कि यो प्रतिक्रियात्मक हुन सक्छ। यसले उपभोक्ताहरूलाई कपटपूर्ण उत्पादनहरू वा सस्तो घरेलु तयारीहरूतिर धकेल्छ, जस्तै ब्लीच जुन धेरै खराब छ!
... वा डाक्टरहरूले निरीक्षण गर्ने अभ्यासमा?
साँचो चिकित्सकीय प्रतिक्रिया र आकर्षक बजार खण्डको बीचमा, दंत चिकित्सकहरु र सौंदर्यशास्त्रीय डाक्टरले पनि छाला को हड्डी को मुद्दा मा एक विश्वसनीय अभिव्यक्ति को रूप मा तैनात गरे।
सर्वप्रथम, उनीहरूको एक गुणात्मक भूमिका छ किनकि सबै छालाहरू उनीहरूको ब्लीचिंग भूमिको वर्षौं भत्काइएका छन्। तिनीहरूले लेजर उपचार वा रासायनिक र मेकानिकल पिलहरू मार्फत पुनर्स्थापनात्मक उपचार प्रस्ताव गर्दछ।
त्यसपछि उनीहरूसँग अधिक समान परिणामका साथ अझ बढी आक्रमण गर्ने बिजुली प्रविधिको हुन्छ, विशेष गरी मेलानोब्लाकि solutions समाधानको इन्टरभेन्सस इंजेक्शनको साथ, उदाहरणका लागि, ग्लुटाथियोन, एक शक्तिशाली एन्टिऑक्सिडन्ट (सुरुमा पार्किन्सन रोगको उपचार गर्न)। यो प्रविधि अत्यधिक महँगो र सम्भावित खतरनाक (पाचन र स्नायु प्रणालीहरू) छ।
यी दुई चरम बीच: सौन्दर्य प्रसाधन क्षेत्र मा खेलाडी।
अफ्रिकी, अफ्रिकी-अमेरिकी वा अफ्रोपियन ब्रान्डको भीडले साबुन, शरीर र अनुहार क्रिम, सेरम, फूड सप्लीमेन्टको रूपमा प्रसाधन सामग्री बेच्दछन् ... उत्तममा, हल्का बत्ती र सक्रिय सामग्रीहरू जुन यसमा थप खेल्दछन्। सेल नवीकरण र रंगको चमक। खराबमा, अति हानिकारक क्रिमहरू जसले प्रयोगकर्ताको छालालाई नष्ट गर्दछ।
जनरलस्ट ब्रान्डहरू (जस्तै ल ओरियल) यस क्षेत्रमा एकदम सतर्क छन्। राजनैतिक शुद्धता र "विश्वव्यापी सौन्दर्य" को युगमा, लाँडेरिंगको जातीय इलाकामा उद्यम गर्न नैतिक तवरमा गाह्रो छ। हामी सजिलै "ब्लीचिंग" भन्दा "चमक" हेरचाहको कुरा गर्नेछौं।
जे होस्, केवल सेल्फ-ट्यानर वा स्प्रे-ट्यान (सेल्फ-टेनिंग स्नान) जसले सूर्यको हानिकारक प्रभावहरू बिना छालालाई रंग दिन्छ, यस विशाल बजारसँग सामना गर्नु पर्छ, जसले एक प्रभावी, द्रुत स्किनकेयर सूत्र फेला पार्नेछ, शानदार, सुलभ र सुरक्षितले अरबौं डलर कमाउनेछ। !
तेस्रो तरीका: आत्मसम्मान र सामान्य भाव।
यी सबैको सामना गर्नुपर्दा, सबैभन्दा बुद्धिमानी तरीका अझै शिक्षामा बाजी लगाउनको लागि छ। मनी लॉन्ड्रिंगको खतराहरूको सामना गर्दै शिक्षा। प्रसाधन सामग्री उद्योग वा शो व्यवसाय मा विज्ञापन hype को अनुहारमा आलोचनात्मक सोच मा शिक्षा। र सबै भन्दा माथि, शिक्षा माआत्म सम्मान। आफुलाई जस्तो माया गर्नुहोस् र आफ्नो छालाको ख्याल गर्नुहोस् यसलाई सम्भव भएसम्म सुरक्षित गर्नका लागि।
अन्तमा, सुन्दर छालाका लागि केहि सरल सुझावहरू: यसलाई दैनिक सफा गर्नुहोस्, मृत कोशिकालाई नियमित तवरले निकाल्नुहोस्, आफूलाई घामबाट जोगाउनुहोस्, आफैलाई हाइड्रेट गर्नुहोस्, यसलाई गुणस्तरीय प्राकृतिक सौन्दर्य प्रसाधनको साथ sublimate गर्नुहोस्।
मेरो ब्लगमा थप पढ्नुहोस्: Panafrican सौंदर्य
अफ्रीकी उत्पत्ति मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको: मान्डि चार्टर
इसिसको गुट मूल इसाई धर्म हो
हो, मँ गर्न सक्छु - लुइस हे (अडियो)
यस डीप को नजिकै?
तल दर्ता गर्नको लागि फारम भर्नुहोस्